kid – စာမကျြနှာ4– Healthy Life Journal
Impetigo ခေါ်ကလေးအရေပြားပေါ်က အ၀ါရောင်အနာဖေးနှင့် အနာများ
ဒေါက်တာသီရိ (MBBS,MPH,DCH) Impetigo ကို နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာတော့ ကျောင်းကကူးတဲ့အနာ (school sores)တွေလို့ ခေါ်တတ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အများအားဖြင့် မူကြိုကျောင်းနဲ့ ကျောင်းကြီးနေစအရွယ် သုံးနှစ်ကနေ ငါးနှစ်အရွယ်ကလေးတွေမှာအဖြစ်များပြီး ကလေးတစ်ယောက်ကနေတစ်ယောက်ကို အရမ်းကူးလွယ်ပါတယ်။ Impetigo ဆိုတာဘာလဲ Impetigo ဆိုတာ streptococcus...
ဒေါက်တာသီရိ (MBBS,MPH,DCH) ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းဆိုတာ ဆီးလမ်းကြောင်းမှာပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ ကျောက်ကပ်၊ ဆီးပို့ပြွန်၊ ဆီးအိမ်နဲ့ ဆီးစွန့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုမှာ ပိုးဝင်တာကို ခေါ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပေမယ့် သုံးနှစ်အောက်ကလေးတွေ၊ အထူးသဖြင့် တစ်ခါသုံးကလေး သေးခံ(diaper) သုံးတဲ့ ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဘက်တီးရီးယားလို့ခေါ်တဲ့ မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့...
ကလေး ထမင်းအစားနည်းလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ . . .
မေး ။ ကလေးက အသက်တစ်နှစ်နဲ့နှစ်လပါ။ ထမင်းအစားနည်းလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ကလေးထမင်း စားဝင်အောင် ဘယ်လိုအားဆေးတိုက်ရမလဲ။ ဒေါ်နွယ်၊ သမိုင်း။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည် ။ ဖြေ ။ ကလေး အသက်တစ်နှစ်နဲ့နှစ်လမှာ...
နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျခြင်းကြောင့် သင့်ကလေးကို ကျန်းမာစေနိုင်
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ အိပ်ရေးဝတာက ကလေးတွေကို လန်းဆန်းတက်ကြွစေပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်တဲ့ ကလေးတွေက နာမကျန်းမှုဖြစ်လွယ်တဲ့အတွက် အိပ်စက်တာက ကလေးတွေကို စိတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စေပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စေပါတယ် ညစဉ် အိပ်ချိန်တစ်နာရီခွဲကျော်လောက် လျော့နည်းတာက တစ်နှစ်လောက် ကြာသွားရင် ကလေးတွေမှာ စိတ်ဓာတ်ကျစေပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားစိတ်...
အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်တို့ရဲ့ အိပ်မက်ဆိုး သို့မဟုတ် သက်ငယ်မတရားပြုကျင့်ခံရခြင်း
– – – – – – – – – ♦ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်)♦ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံ ကြီးတွင် လိင်အကြမ်းဖက်ခံရခြင်း သို့မဟုတ် သက်ငယ်မတရား ပြုကျင့်ခံရခြင်းကြောင့် အရေးပေါ်ခွဲ စိတ်ကုသမှု ခံယူနေရသော...
မွေးကင်းစကလေး မျက်စိနာနေလို့ . . .
မေး. မွေးကင်းစအရွယ် ကလေးမျက်စိနာနေလို့ ဘာလုပ်ရမလဲပြောပေးပါ။ နဂါးမင်း (FB) ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. မျက်စိနာတာက မွေးကင်းစကလေးလေးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ အဲဒါကို ဆေးပညာအရ Neonatal Conjuntivitis လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါက မိခင်ရဲ့ သားဖွားလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ...